Chain Unganidzo Yechinguva fenzi
Fence panel size: 1.825 * 3.658m Wire: 2.6mm pamberi pvc / 3.6mm mushure pvc Mesh hole: 2,3 / 8 "* 2,3 / 8" Chimiro: Yakasviba yakasviba RAL 6005 Fence tsoka ...
na admin pa 20-03-18
W * H: 2250 * 2500mm, saizi Mesh: 50x100mm, Wire dia 5.0mm. Post: 80 * 80 * 2.0 * 3000mm Kumusoro kune yakakwirira yakasimba poda (yakakurumbira brand Akzo Nobel) kuramba concussion. Pamusoro peV Type panhare kusvika kune-yakatemwa ....
Yakachengeteka yakakwirira fenzi pani
W * H: 2300 * 2500mm, saizi Mesh: 76.2 × 12.7mm, Wire dia 4.0mm. Kumusoro kune yakakwira yakasimba poda kuramba concussion. Pamusoro pepaneri, wedzera concertina waya uye yakakomberedzwa waya kuti uwedzere ...
ClearVu yakasimbiswa mapaneru
W * H: 3358 * 3297mm, Mesh size: 9.5 × 76.2mm, Wire dia 4.0mm. Yakasimbiswa bar yakavharidzira 15 * 5.0mm flat bar pa150mm papanera. Iyi nzvimbo yakakwira density, yakakwira tensile, nhete mesh aperture yemunwe uye foo ...